Ihe omuma: Otu esi amata okpu okpu okpu okpu
Black hat SEO bụ otu ụdị omume anyị ji eme ihe iji melite ogo nke weebụsaịtị na search engine s. O megidere okwu na ọnọdụ nke Google, Bing, na Yahoo. Kama nke ahụ, SEO dị ọcha bụ usoro dị nchebe ma nyere gị aka inwekwu ntụkwasị obi na ịntanetị.
Nke a sitere na fim ndị Hollywood na-ese ọdịiche dị n'etiti ezigbo mmadụ na onye ọjọọ. Ihe odide ojoo na-eji akwa chaa chaa, ka ndi ezi mmadu na-eji akwa ejiji.
Michael Brown, ọkachamara ọkachamara si Semalt , na-emesi obi ike na n'oge na-adịbeghị anya, nwa nwa SEO aghọwo isi nsogbu maka webmasters. Ọ na-ejikarị kọmputa na-agba ọsọ na spammers. Site na usoro a, ha na-emepụta nsogbu maka ndị nwe ụlọ ebe nrụọrụ weebụ, na-amanye ngwaọrụ gị ma na-eme arụmọrụ na-ezighị ezi online na nke offline.
Ọ dị mkpa ịghọta na imejuputa ọkpụkpọ ojii SEO usoro na atụmatụ nwere ike ịnweta ebe nrụọrụ weebụ gị site na nsonaazụ ọchụchọ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji nweta okporo ụzọ dị elu ma na-aṅa ntị na chaa acha ọcha SEO naanị.
Okwu Mmalite nke Black Hat SEO
Black hat SEO bụ usoro nke engines na-achoghi ya ma na-ejikwa ọtụtụ webmasters mee ka ọnọdụ saịtị ha dị mma. Omume ndị a abụghị usoro na ọnọdụ nke Google, Yahoo, na Bing ma ghara ikwenye na ị ga - achọpụta ihe ga - amasị gị n'oge ndụ. Enwere ọtụtụ ndụmọdụ na echiche dị iche iche iji gbochie webmasters site na iji nwa ojii SEO. Ị ga-elele Ntuziaka Webmaster nke Google, Ntuziaka Webmaster nke Bing, na Yahoo's Webmaster Guidelines iji nwee echiche nke ihe nwa ojii SEO na otu esi tufuo ya. I kwesiri izere ugwo oru ugwo iji hụ na ebe nchekwa gi di n'igwe.
Olee otú ị ga - esi amata ụzọ aghụghọ SEO?
Ọrụ SEO kachasịsịsị nke a ga-eji mee nchọpụta ọrụ SEO bụ ọdịnaya dị iche iche, akpaaka ederede, ibe ụzọ ụzọ, njikọ zoro ezo na edere arịlịka, ihe ntinye okwu, SEO dị njọ, na-akọ ndị na - asọmpi gị n'enweghị ihe ọ bụla, ntanye, usoro njikọ, ndị na-amaghị akwụkwọ na-ezighị ezi, ma jikọta nhazi. Ọzọkwa, ịkwesịrị ịkọwa isiokwu gị, achọghị ịchọta netwọk njikọ, njikọta wiilị, ma jikọta ugbo, ma zere ntinye mkpịsị ụkwụ na-eme ka ọ bụrụ nke ọma. E gosipụtara na ịme ihe nzaghachi, ajụjụ njiri aka na Google, ịmepụta subdomains n'enweghị ihe ọ bụla, na ịmepụta ibe na omume enyo na-amachibido iwu site na search engines. I kwesịghị itinye aka na mmemme ndị dịka nje, phishing, malware, na Trojans n'ihi na ihe ndị a nile bụ akụkụ nke nwa ojii SEO.
Ịkọ akụkọ ojii SEO
Ọ bụrụ na itinye aka na ọrụ a, ị gaghị enweta nsonaazụ achọrọ. Ma ọ bụrụ na ị hụ onye ọzọ na-etinye nwa oji SEO, ị nwere ike ịchọ ịkọ ya. Ọ bụrụ na ịnweghị akuko, ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike ịlụ ọgụ site na hacks ha, mkpọsa SEO ọjọọ, na njikọ njikọ. Ya mere, ọ dị mkpa ịkọ akụkọ na Google iji hụ na saịtị gị nwere ike ịdabere n'ịntanetị.
I kwesịrị izere okpu ojii ojii SEO?
Ọ bụ eziokwu na SEO nwa ojii na-enweta ọkwa dị mma na saịtị gị na nchọta search engine, mana nke a bụ iwu na-akwadoghị ma nwee ike ịnweta saịtị gị maka ndụ. A ga-enwe ihe ịga nke ọma n'oge na-adịghị anya mgbe okporo ụzọ gị na-amụba, mana Google na-emetụta ọtụtụ ahụhụ na weebụsaịtị ndị dị otú a, ọ gaghị enwe ike ịmegide mmetụta ndị na-agbawa obi. Ọ pụtara na usoro SEO nwa ojii adịghị mma maka gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ịzụ ahịa maka ndụ gị niile.